Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : selection 3
အမှတ် ၁၆၅ ၂၀၀၄ ဇန်န၀ါရီ အတွေးအမြင် မှ
ဂျူနီယာဝင်း ၏ လွဲမှားခဲ့သောအနာဂတ်တွက်ကိန်းများ
"to err is human" တဲ့။လူဆိုတာမှားမှာပဲဟုဆိုပါသည်။ အမှားနှင့်ကင်းသူဟူရ်ျမရှိနိုင်။ အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်၊မဖြစ်နိုင်ဆိုတာမျိူးကျတော့ပိုရ်ျပင်မှားနိုင်ပေတော့သည်။
IBM ကိုတွေ.ရှိခဲ့သူ Thomas Watson က ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။’ကျွန်တော့်အထင်ပြောရရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကွန်ပြူတာ တောင်းဆိုမူဟာ စက်၅လုံးထက်မကျော်နိုင်ပါဘူး။’ဒါပေမယ့် ယနေ. IBMကွန်ပြူတာခေတ်ကရာကဏ္ဍန်းနဲ. စကားပြောနေပါပြီ။ ၁၈၇၇ ခုနှစ် နဲ. ၁၈၈၂ ခုနှစ် ကြားမှာ အမေရိက သမတ ဖြစ်ခဲ့သူ RutherfordBirchard Hayes က ၁၈၇၆ ခုနှစ်မှာ တယ်လီဖုန်းတွေနဲ.ပတ်သတ်လို. အခုလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ‘ဒီတီထွင်မူဟာ အံ့သြစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ.ကျရင်တော့ ဘယ်သူမှ သုံးကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။’ဒါပေမယ့် ယနေ.တယ်လီဖုန်း အသုံးဝင်မှုကိုလူတိုင်းမြင်တွေ.နေကြရပါပြီ။တယ်လီဖုန်းမှအိမ်တွင်းသုံးတွေ၊သယ်ဆောင်လို.ရတဲ့တယ်လီဖုန်းတွေ ၊ အရောင်အသွေးစုံ ၊ ပုံသဏ္ဍန်မျိူးစုံဟာ လောက်တောင် မလောက်ပါဘူး။
Auguste Compte ဟာ ပြင်သစ်လူမျိူး စိတ်ပညာရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးသားခဲ့တဲ့ စိတ်ပညာဗေဒ ကို ယနေ. Herman တက္ဘသိုလ် မှာသင်ကြား နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ၁၈၃၅ ခုနှစ် မှာကြယ်တွေနဲ. ပတ်သတ်ပြီး ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ‘Nous concevons la possibilité de ............’’ကျွန်တော်တို.က သူတို.ရဲ. ပုံပန်းသဏ္ဍန်တွေ၊အကွာအဝေးတွေ၊သူတို.ရဲ.ဟန်ပန်တွေ၊လှုပ်ရှားမူတွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ကောင်းပါ
တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို.ရဲ. ဓာတုဗေဒ ဆိုင်ရာ ဖွဲ.စည်းမူတွေ၊ သူတို.ရဲ. မြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ အသွင်သဏ္ဍန်တွေကို လေ့လာမူကို လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး’ တဲ့။၁၈၅၉ ခုနှစ်မှာ စပက်ထရိုစကုပ် (Spectoscope) ခေါ် ရောင်စဉ်ကြည်. ကိရိယာ ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီ ကိရိယာ နဲ. ကြယ်တွေရဲ့ ဖွဲ.စည်းမူတွေ၊
သူတို.ရဲ. ဓာတုဗေဒ ဆိုင်ရာ အသွင်သဏ္ဍန်တွေကို လေ့လောခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် သိပ်ပံ ပညာရှင်ကြီး Albert Einstein ဟာ နျူကလိယစွမ်းအင် နဲ.ပတ်သက်ပြီး ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှာ သူ.ရဲ.ယူဆချက်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ‘နျူကလိယစွမ်းအင် တစ်နေ.မှာ ပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတာဟာ တော်တော် မဖြစ်နိုင်ဆုံး၊အသေးနုတ်ဆုံး အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်တမ်ကိုခွဲမှသာ ရနိုင်မယ့် နျူကလိယ ကို မရနိုင်ပါဘူး။အက်တမ်ကို ခွဲနိုင်မယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။’ အိုင်စတိုင်း ဟာ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာတော့ သူ.အမြင်ကို ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။ သူ.ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း တွေဖြစ်တဲ့ ရုပဗေဒပညာရှင်တွေက အဏုမြူဗုံး ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကြာင်းအရာ တွေပါတဲ့ စာတစ်စောင်ကိုသမတ Roosevelt ဆီပေးပို.ရာမှာ သူက လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကအဲဒီ ထုတ်လုပ်မူမှာ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ သမတ ထံ ဒီလက်နက်ကို အသုံးမပြုဖို. စာရေးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၄၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ.
မှာ အမေရိကန် က ပစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အဏုမြူဗုံး ဟာ ဟီရိုရှီးမားကို ကျခဲ့ပါတယ်။စစ်အပြီးမှာ အိုင်စတိုင်းဟာ နျူကလိယ အဏုမြူဗုံးလုပ်ငန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန်.ကျင်ခဲ့ပါတယ်။
Lee De Forest က အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ လကမ္ဘာနဲ. ပတ်သက်ပြီး အခုလို ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ‘Mettre un homme dans une fuseaplusieurse tages et......’’ လူတစ်ယောက်ကို ဒုံးပျံ ထဲမှာ ထဲ့ပြီး လကမ္ဘာရှိရာ သွားမယ်၊ သိပ်ပံ ပညာဆိုင်ရာ လေ့လာမူတွေ လုပ်မယ်၊ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ မြေ ကို ပြန်လာမယ် ဆိုတာဟာ ဂျူးဗန်း ရဲ. စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင် တစ်ပုဒ် မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။င်္ ဒါပေမယ့် သူပြောခဲ့ပြီး ၁၂ နှစ်အကြာ မှာ လူသားဟာ ပထမဦးဆုံး လကမ္ဘာ မြေပေါ် ခြေချနင်း ခဲ့ပါတယ်။
Auguste Lumiere ဟာ ၁၈၉၅ ခုနှစ် မှာ သူ.ရဲ.အစ်ကို အကူအညီနဲ. ရုပ်ရှင် ရိုက်စက်ကို တီထွင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အဲဒီနှစ်တုန်းကပဲ အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ် ။ င်္ကျွှန်တော့် ရဲ. တီထွင်မူဟာ အတိုင်းအတာ
တစ်ခုအတွင်း မှာသာ စူးစမ်းစရာ သိပံပညာရပ် တစ်ခုလိုပဲ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးအရတော့ ဘယ်လိုမှ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ င်္ လို.ဆိုပါတယ်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှာတောင် သူက အခုလို တွက်ကိန်း
ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ‘ရုပ်ရှင်တွေဟာ တော်တော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်
တော့ ရေရှည် မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး၊ အသံနဲ. ရုပ် ကြည်လင် ပြတ်သား မူဆိုတာ လုံးဝဥသုံ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ’
အခုလက်ရှိဘ၀မှာ ရုပ်ရှင်တွေရဲ. တိုးတက်မူ ဟာ လိုက်လို.တောင် မမီနိုင် တော့ပါဘူး။
လေထဲမှာ လူတွေမသွားနိုင်ဖူး လို. (Academy of Science) အဖွဲ.၀င် နက်ခတ္တဗေဒ ပညာရှင် (Jpseph de Lanlande) က၁၇၈၂ ခုနှစ်မှာ အခုလိုဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ‘Il est totalement impossible que..........’’လူတွေ လေထဲ ပျံနိုင်မယ် ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒီလိုလုပ်နိုင် ဖို. အံ့သြစရာ ကောင်းတဲ့ တွက်ချက်မူ နဲ.တည်ဆောက် ထားတဲ့ တောင်ပံ တွေရှိဖို.လိုပါတယ်။ တစ်စကန်.ကို တစ်မီတာ နှုန်းရှိ တဲ့ အမြင့်နှူန်ူး နဲ. လှူပ်ရှားနိုင်ရဦး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တွေးခေါ် တာဟာ ရုးသွပ် မူ သာဖြစ်ပါတယ်။’ သူပြောပြီး ၁၃ လ အကြာမှာMontgofier ညီအကိုတွေဟာ ပထမဦးဆုံး မိုးပျံပူဖောင်း နဲ.ပျံသန်းမူ ဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၇၉၃ခုနှစ် နဲ. ၁၈၅၉ ခုနှစ် ကြား လန်ဒန်တကသိုလ်မှ နက်ခတ္တဗေဒ ပါမောက်ခ Dyonysus Landner က အခုလို ဆိုပါတယ်။‘မီးရထားနဲ. အမြန်ဆုံး ခရီး တွင်နိုင်မယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။ ခရီးသည် တွေဟာ အသက် ရူကျပ်ပြီးသေသွားနိုင်ပါတယ်’ တဲ့ ။ ၁၈၅၃ ခုနှစ် မှာ အဂလန် က (The Quarterly Review) သတင်းစာ က အခုလို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ‘မီးရထား တွေဟာ မော်တော်ယာဉ် တွေ အားလုံးထက် နှစ်ဆလောက် မြန်ပြီး ကျော်တက်သွားမယ် ဆိုတာဟာ ရူးသွပ်တဲ့ စဉ်းစား တွေးခေါ်မူသာ ဖြစ်ပါတယ်၊’ ယနေ. မီးရထားတွေရဲ. ရပ်တည်မူ ဟာသူတို.နိုင်ငံ တွေမှာ တစ်နာရီကို မိုင် ရာဂဏန်း ဖြစ်နေကြပါပြီ။
မဖြစ်နိုင်ဘူး လို.သူတို.က ပြောခဲ့ကြပါ တယ်။ ပြောတဲ့သူတွေကလည်း သာမန်လူတွေမဟုတ် ပါဘူး။ တကယ့်ဧရာမ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာတွေဖြစ် လာတာကတော့ ယနေ.မျက်မြင်ပါပဲ။ နောင်အနာဂတ်မှာ နောင်တစ်နေ.နေ.မှာ .................မဖြစ်နိုင် ဆိုပြီး ပြောတာတွေကို အနာဂတ်လူသား တွေက ယနေ. ခေတ်လူတွေကို အခုလိုပဲ ထောက်ပြကြဦးမယ် ထင်ပါရဲ.။
Posted by Junior Win at 10:28 PM
posted by ngwezinyaw